Cabsi Malaga Qabaa in la Waayo Reer Guuragii dhaqan jiray Xoolaha (dhegayso) – Radio Daljir
Oktoobar 8, 2017 7:35 b 0
Bulshada soomaaliyeed ayaa walaac xoogan ka qabtaya in ladabar jaro xoolaha somaaliya oo ah lafdhabarta dhaqaalaha ee dalka soomaaliya iyo dadkii kutiirsanaa ee dhaqanjiray tan iyo wixii kadanbeeyay abaartii dalka kudhufatay.
Waxaa jiray xoolo badan oo ladaaweeyay hadana baqtiyay kuwas oo eersaday dawooyinkii lasiiyay.
walaaca ugudaran ayaa ah in ay jiraan hay,ado doonaya in dadkii xoolodhaqatada ahaa ee magaaladu ay kuxirnayd laga gasoo kaxeeyo xoolohoodii lana dajiyo magaalada iyadoo looqaybinaayo mucaawano ay keeneen hay,adaha sheega in ay caawinayaan dadka ay abaatu saamaysay.
Arintan ayaa ah mid cirib tiraysa dhaqaalihii koowaad ee soomaaliya waxaana meesha kabaxaya dadkii xoolaha dhaqanjiray.
Hadaba arintan waxaa daraasad kusameeyay lana soo xiriiray radio daljir Nabadoon Mursal Maxamuud cabdo oo kamid ah nabadoonada Gobolka bari.
Xoolo dhaqato Reer Guura ah oo ku Dhibaataysan Kaam kuyaal Cabudwaaq (dhegayso)